China International Ngosipụta Ngosipụta (CIHS) hiwere na 2001. N'ime afọ iri gara aga, China International Hardware Show (CIHS) na-agbanwe maka ahịa, ụlọ ọrụ ọrụ ma zụlite ngwa ngwa. Emechaala nke ọma dị ka ihe ngosi akụrụngwa nke abụọ kachasị n'ụwa mgbe INTERNATIONAL HARDWARE FAIR COLOGNE dị na Germany. CIHS bụ usoro ịzụ ahịa kachasị amasị ndị nrụpụta ụlọ ọrụ na ndị ọrụ azụmaahịa nwere ikike gburugburu ụwa, dịka International Federation of Hardware and Housewares Associations (IHA), Association of German Tool Manufacturers (FWI), yana Taiwan Hand Tools Manufacturers`` Mmekọrịta (THMA).
China International Hardware Gosi (CIHS) bụ Asia si n'elu ahia ngosi maka dum ngwaike na N'onwe ndi na-enye ọkachamara ahịa na ndị na-azụ ahịa na a mbara udi nke ngwaahịa na ọrụ. E guzobela ya ugbu a dịka ihe ngwanrọ kachasị nwee mmetụta nke Asia Asia mgbe INTERNATIONAL HARDWARE FAIR dị na cologne.
Datebọchị: 8/7/2020 - 8/9/2020
Ebe: Shanghai New International Expo Center, Shanghai, China
Ndị na-ahazi: China National Hardware Association
Lightlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ ọkụ, Council Council maka ịkwalite azụmaahịa mba ụwa
Gịnị mere Ihe Ngosi
Lekwasị anya n'inweta mbupụ ụlọ ọrụ akụrụngwa Asia
Nnukwu nchekwa data nke ndị na-azụ ahịa na mba ofesi dị elu ndị na-esonye na mmemme mmemme azụmahịa
Rite uru site na nka nke CNHA ngwaike ngwaike nke China ma jiri ihe omuma ya banye ahia ndi China
Ebe ngosi agbakwunyere maka visibiliti ngwaahịa ọzọ
Soro na onsite ihe, businessmatching na-eduga-onu ọmụma na otu nzọụkwụ
Nkwado siri ike site na "INTERNATIONAL HARDWARE FAIR Cologne"
Ndị na-eme ihe ngosi site na ngwaahịa: Ngwaọrụ, Ngwaọrụ aka, Ngwaọrụ ike, Akụrụngwa Pneumatic, Ngwaọrụ Mechanical, Nwepu abrasives, Ngwa ịgbado ọkụ, Ngwaọrụ ngwa ọrụ, Mkpọchi, nchekwa ọrụ na ngwa, Mkpọchi & igodo, Ngwa akụrụngwa & sistemụ, Nchekwa ọrụ na nchekwa, Akpochi mkpọchi, Nhazi akụrụngwa, Ngwa akụrụngwa, Akụrụngwa nnwale, Ngwa ọgwụgwọ, Mgbapụta & valvụ, Mee N'onwe Gị & ngwaike ụlọ, Ihe owuwu ụlọ & akụrụngwa, Akụrụngwa akụrụngwa, Ngwa eji achọ mma, ngwa ngwa, mbọ, waya & ntupu, Nhazi akụrụngwa, Ngwa akụrụngwa, Ngwa ule, Ngwa ọgwụgwọ akụrụngwa, mgbapụta & valvụ, Ogige.
Otu ndị ọbịa: Ahia (etalọ ahịa / N'ogbe) 34.01%
Ekspootu / Bubata 15.65%
Akụrụngwa akụrụngwa / Ebe obibi / Storelọ Ahịa 14.29%
Nmeputa / Prod 11.56%
Agent / onye nkesa 7.82%
Onye ahia ikpeazụ 5.78%
N'onwe Gị Onye Ochu Uzo 3.06%
Lọ ọrụ & ịchọ mma / Onye ọrụ ngo / Injinia 2.72%
Association / Onye Mmekọ 1.02%
Architect / ndụmọdụ / ala na ụlọ 1.02%
Media / Pịa 0.68%